Zerodium dia manolotra hatramin'ny $ 500.000 ho an'ireo izay mahavita manenjika WhatsApp | Vaovao momba ny gadget
Zerodium dia manolotra hatramin'ny $ 500.000 ho an'ireo izay mahavita manenjika WhatsApp
Nandritra ny fotoana vitsivitsy dia maro ireo hackers izay nandray anjara toerana lehibe tamin'ny ekosistema isan-karazany, toa ny iOS nefa tsy nandeha lavitra intsony, izay lasa mpikambana mavitrika amin'ny jailbreak, rindrambaiko izay ahafahana mametraka apetraka amin'ny iPhone. manalavitra ny fameperana nataon'i Apple, hanatevin-daharana ny laharan'ny orinasam-piarovana samihafa na hiasa ho azy ireo ho takalon'ny valisoa mahaliana hatolotr'izy ireo matetika. Google, Facebook, Microsoft ary Apple no orinasa mandoa ny tsara indrindra ho an'ireo olona rehetra mahita hadisoana na fomba hanimba ny serivisiny. Saingy tsy misy amin'ireo orinasa ireo no afaka manana $ 500.000 ho an'ireo karazana fahalemen'ny andro aotra, afa-tsy ny Zerodium.
Ny faharefoana amin'ny andro an-andro dia ireo izay misy amin'ny rafitra fiasa na fampiharana hatramin'ny nahariana azy ireo sy ny mpamorona azy, noho izany ny anarany. Ireo karazana marefo ireo no tena tadiavin'ny orinasa sy omeny valisoa. Zerodium dia orinasa iray natokana hampirisika ny karazana hackers rehetra hahita ireo karazana fahalemena ireo, fa tsy hampiasa azy ireo, fa amidiny any amin'ny governemanta ny ankamaroany.
Ny fanambarana farany nataon'ny orinasa dia mampiseho amintsika ny fomba fahavononany handoa izay hacker rehetra manolotra anao marefo amin'ny andro aotra amin'ny WhatsApp, Signal, WeChat, Telegram, Viber, Faceboom Messenger ary iMessage. Signal dia iray amin'ireo fangatahana fandefasan-kafatra izay nahazo laza be tato ho ato, indrindra taorian'ny nahatongavan'i Donald Trump ho filoham-pirenena amerikana.
Saingy tsy izany no valiny lehibe indrindra natolotry Zerodium mpijirika. Amin'izao fotoana izao manolotra $ 1,5 tapitrisa ho an'ireo mpijirika izay mahomby mahita fahalemena mandritra ny andro aotra izay mamela ny fidirana amin'ny iPhone an'ny Apple, ka mandingana ny rafitra fiarovana rehetra atolotry ny iOS.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Zerodium dia manolotra hatramin'ny $ 500.000 ho an'ireo izay mahavita manenjika WhatsApp
Ny taranaka faharoa amin'ny Pixel, azo aseho amin'ny 5 Oktobra ho avy
Ny 12 septambra no daty nofidian'i Apple hanolotra ny iPhone 8